Stadia 2.16 na-enyocha ozi na-esote site na koodu isi | Gam akporosis
Stadia 2.16 na-enyocha akụkọ ndị ọzọ site na koodu isi
Google Stadia bụ ọrụ ndenye aha egwuregwu vidio na igwe ojii nke jisiri ike na-adọta ọtụtụ ndị ahịa na obere oge. Otu n'ime ike ya bụ playback nke aha ya na mkpebi 4K na 60 FPS, ọ dakọtara na HDR na ndị egwuregwu ga-enwe ike igwu ya nke ọma.
Ihe dị mma banyere ikpo okwu a bụ na egwuregwu dị elu na-abịarute, na-enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ nke ọgbọ egwuregwu ọhụụ ọhụụ. Iri na abụọ gara aga nke Stadia buliri bụ: PUBG, Destiny 2, The Turing Test, GRID, Zombie Army 4, Spitlings, GYLT, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, SteamWorld Heist, SteamWorld Dig 2, Stacks on stacks, and Serious Sam Collection.
1 Gịnị na-abịa mbipute 2.16
2 Ekekọrịta gị captures
3 Nkwado gam akporo TV
5 Na-enyocha ihe ndị ị rụzuru na ekwentị gị
Gịnị na-abịa mbipute 2.16
Koodu isi maka Stadia 2.16 kpughere ma ọ dịkarịa ala atụmatụ ọhụrụ anọ ọ ga-emejuputa, n'etiti ha otu n'ime ihe dị mkpa bụ ndakọrịta karịa ngwaọrụ. Abụọ ekwentị ọhụrụ ndị kwekọrọ na Stadia bụ OnePlus 8 na OnePlus 8 Pro, dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta otu ma jiri ọrụ a.
Ekekọrịta gị captures
Ọ bụ ọrụ dị mkpa, ọkachasị ike ịkekọrịta egwuregwu anyị, na mmelite na-esote ọ ga-ekwe omume iwepụta onyonyo na obere vidiyo site n'oge ụfọdụ. Ma Stadia anaghị agbakwunye ọrụ nke ịkekọrịta na netwọk mmekọrịta kasị ewu ewu na ọ bụ ihe ha na-arịọ site na ọgbakọ ndị gọọmentị.
Google na - arụ ọrụ ugbu a na - enwe ike ịkekọrịta njide site na njikọ, maka nke a, ọ ga - eji ọrụ dị n'ime ya iji kwado ihe oyiyi na vidiyo. N'inwe ọtụtụ ọrụ, ọ ga-abụ na ị ga-eji ụfọdụ n'ime ha ka ndị ahịa na ndị ọrụ jiri uru ọhụụ a.
Nkwado gam akporo TV
Google kwadoro na mbido Stadia na ọrụ egwuregwu gụgharia ga-abata na 2020 na gam akporo TV ma nke a yiri ka ọ bụ eziokwu. Maka nke a, anyị ga-achọ telivishọn nwere gam akporo TV iji rite uru zuru oke nke ọrụ nke nnukwu ihuenyo.
Na Chromecast Ultra ọ ga-ekwe omume igwu egwu Google Stadia, ihe niile na-agafe ụfọdụ ihe achọrọ kacha nta, n'etiti ha nwere ngwaọrụ Chromecast Ultra, onye na-ahụ maka Stadia, akaụntụ Stadia, telivishọn na njikọ dị elu dị elu nke opekata mpe 10 Mbps.
Google Stadia -enye anyị ohere si ya olu olu chat iji egwuregwu, ọ bụ ezie kwere nkwa imejuputa nkata ederede yabụ anyị nwere ike ịgwa ndị enyi anyị ndepụta. Ihe ọzọ anyị nwere ike ime bụ izipu ndị ọrụ ozi ozugbo, ọbụlagodi nke ahụ bụ otu o si pụta na agbụ ahụ egosiri.
Na-enyocha ihe ndị ị rụzuru na ekwentị gị
Akụkọ kacha ọhụrụ banyere ngwa Stadia gam akporo. Anyị nwere ike ịlele ihe ndị anyị rụzuru site na ama na ngwa ahụ n'oge ọ bụla. Ọ ga egosiputa rụzuru agbachi na ndị ka ga-emeghe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Stadia 2.16 na-enyocha akụkọ ndị ọzọ site na koodu isi
Huawei P30 Pro New Edition ga-enwe ọrụ Google
Meizu 17 ga-abata na ihuenyo Samsung Super AMOLED